Arag sawirada:450- dagaalyahanada Ginbot 7-katirsan oo Gonder dhinaca Konfured kagalay. | ogaden24
Arag sawirada:450- dagaalyahanada Ginbot 7-katirsan oo Gonder dhinaca Konfured kagalay.
War kasoo baxay Jabhada Ginbot 7-ayaa lagu sheegay in cutubyo katirsan ciidamadooda oo dhamaystay Tababar ay weerar kuqaadeen magaalada Gonder ee xarunta Gobolka Gonder ee maamulka Amxarada.
Weerarka oo dhacay 21-kii bishan ayaa lagu sheegay in maleeshiyadu Guul kagaadhay saldhigii ay weerareen oo lagu sheegay Taliska Guud ee ciidamada Woyanaha ee kahawlgala Guud ahaan Gobolka Gonder, warka saaxafada loo qaybiyay ayay Ginbot 7-kusheegtay in saldhiga oo kuyaala duleedka Konfureed ee Gonder uu dagaalka kadhacay qaatay saacado badan.
Qayb katirsan 450-Askari oo katirsan ciidankeena oo Tababar ugu soo dhamaaday Konfurta Gonder ayaa weerarkii ay kuqaadeen Taliska ciidanka TPLF, waxay kudileen in kabadan 20-Askari waxayna kudhaawaceen Askar kabadan 20-kale ayaa lagu yidhi warka ay baahisay Jabhada Amxarada ee Ginbot 7.
Warka kasoo baxay Jabhada Ginbot 7- ayaa lagu sheegay in dagaalka Itobiya lagaga xoraynayo TPLF uu sii socondoono ilaa laga Gaadho Guusha kama dambaysta ah oo sida ay sheegeen xiligeedii haatan lagaadhay.